Stuttgart Airport dia mizaha ny entan'ny mpitondra entana
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Stuttgart Airport dia mizaha ny entan'ny mpitondra entana
Ny fampivoarana ny fitaovana fikirakirana ny tany mizaka tena dia heverina ho sarotra
Mpisava lalana Stuttgart Airport amin'ny fizahana mizaka tena
Ny fiara dia miaraka amina fakantsary 3D efatra misy jiro infrared ho an'ny fahitana amin'ny alina, scanner laser roa azo antoka ary rafitra GPS avo lenta
Ny fitsapana dia ao anatin'ny tetik'asa "SmartFleet - fiara ara-barotra mahaleo tena ho an'ny fandidiana seranam-piaramanidina azo antoka sy mahomby", izay vatsian'ny Minisiteran'ny Federaly Alemanina misahana ny toekarena sy angovo
Ny fitsapana tena izy tamin'ny fizotran'entana mahaleo tena tao amin'ny seranam-piaramanidina Alemanina dia natomboka tamin'ny Seranam-piaramanidina Stuttgart. Amin'ny dingana misy ankehitriny ny tetik'asa SmartFleet, ny fampandrosoana vaovao avy amin'ny VOLK Fahrzeugbau GmbH dia efa afaka mitondra lalana sasany amin'ny zorony tsy miankina. Ao Stuttgart, andrana ireo fiasa toy ny fitetezana mankany amin'ny toerana efa voafaritra mialoha, ny fitanana ny lane, ny fitadiavana ireo sakana, ny hafainganana ary ny freins.
Ny fitaovana mandroso dia mamela ny prototype hivezivezy tsy misy fanampiana avy amin'ny olombelona. Ny fiara dia miaraka amina fakantsary 3D efatra misy jiro infrared ho an'ny fahitana amin'ny alina, scanner laser roa azo antoka ary rafitra GPS avo lenta. Fantatry ny traktera ny toerana misy azy ao anatin'ny roa centimetatra. Ny tug SmartFleet vaovao dia mameno ny andian-tsambo elektrika mitombo ao amin'ny seranam-piaramanidina: bateria lithium-ion no manome azy hery.
Hatreto dia misy olona ao anaty sambo foana noho ny antony azo antoka, izay afaka manakana ny fiara, raha ilaina izany. Ny fampivoarana ny fitaovana fikirakirana ny tany mizaka tena dia heverina ho sarotra. Ny toetoetran'ny fifamoivoizana any amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy mitovy amin'ny an'ny eny an-dàlana ary mila miatrika ny fizotran'ny asa sarotra ny fiara.
Ny fitsapana dia ao anatin'ny tetik'asa "SmartFleet - fiara ara-barotra mahaleo tena ho an'ny fampandehanana seranam-piaramanidina azo antoka sy mahomby", izay vatsian'ny Minisiteran'ny Federaly Alemanina misahana ny toekarena sy angovo. Ankoatra ny seranam-piaramanidina Stuttgart sy VOLK, ny mpanamboatra fiara Aebi Schmidt Germany dia ao anatin'ny consortium ihany koa. Izy ireo dia natokana ho an'ny fikolokoloana automatique ririnina. Mandritra ny telo taona niasan'izy ireo, ny mpiara-miasa dia mandalina ihany koa ny vokatry ny mandeha ho azy eo amin'ny tontolon'ny asa. Ny mpiasa amin'ny serivisy an-tanety dia manao asa mafy ara-batana ary matetika iharan'ny tsindry hazo lena. Ireo fitaovana mitokana dia hanohana azy ireo amin'ny ho avy. Ny tetik'asa fikarohana dia mitentina 3.9 tapitrisa euro ny totaliny.
Ny fangatahana fiaramanidina any Amerika Avaratra dia miverina raha mihena kosa i Eropa